तैमुर जन्मँदा करिनाले अस्विकार गरेको नाम अब कान्छो छोराका लागि राख्लिन् ? | Ratopati
तैमुर जन्मँदा करिनाले अस्विकार गरेको नाम अब कान्छो छोराका लागि राख्लिन् ?
बलिउडका स्टार कपल करिना कपुर खान र सैफ अली खान दोस्रो पटक आमाबुवा बनेका छन् । आइतबार करिनाले छोरालाई जन्म दिएकी छिन् । त्यतिबेला देखि नै पटौदी परिवार चर्चामा छ ।
करिना कपुरले आफ्नो दोस्रो छोराको नाम के राख्नेछिन् यसबारे निकै चर्चा छ । सोसल मिडियामा प्रशंसकले थुप्रै नाम पनि सुझाएका छन् । करिनाले जेठो छोराको नाम तैमुर राख्दा पनि निकै चर्चा भएको थियो ।
सैफ करिनाले ट्रोल्सको सामना पनि गर्नुपरेको थियो । तैमुरको नामको विषयमा इन्डिया टुडे कन्क्लेवमा करिनाले भनेकी थिइन्, ‘अस्पताल जानु अघिल्लो रात सैफले छोरा जन्मिएको खण्डमा नाम ‘तैमुर’ नै राख्ने कुरामा तिमी पक्का छौ ?’
‘हामीले नाम फेरेर फैज राख्न सक्छौं । यो बढी पोएटिक र रोमान्टिक छ । तर मैले अस्विकार गरिदिएँ । मैले छोरा भएको खण्डमा तैमुर नै राख्छु भनिदिएँ । मेरो छोरा फाइटर होस् भन्ने म चाहन्छु । तैमुरको अर्थ आइरन हो र म आइरनम्यान जन्माउन चाहन्छु । उसलाई तैमुर नाम दिँदा मलाई गर्व छ ।’
अब सोसल मिडियामा सैफ करिनाले आफ्नो दोस्रो छोराको नाम फैज राख्लान् त भन्ने चर्चा सुरु हुन थालेको छ ।
स्मरण रहोस्, तैमुर अली खानको जन्म सन् २०१६ मा भएको थियो । तैमुर सोसल मिडिया सेन्सेसन हुन् । उनको तस्बिर र भिडियो निकै भाइरल हुन्छन् ।
#saif ali khan#kareena kapoor